चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ? - Janakpur Today
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ?
काठमाडौं,असोज २५ गते। चीनका लागि नेपाली राजदुत लीलामणि पौडेलले शुक्रवार विहानै लेखे–रेल र पारवहन अन्तरसम्वन्धित छन । रेलविना पारवहन सुविधा उपयोगी हुन सक्दैनन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउनु भन्दा २४ घण्टा अघि आएको उनको यो अर्थपुर्ण टिप्पणीले २३ बर्षपछि चीनको राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंले उनीसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुराको पेटबोली बोलेको छ ।
नेपालले बीआरआईमा सहभागीता जनाई सकेको छ। तर बीआरआई भनेको केवल रेल भने होइन । यससँगै सडक सञ्जालदेखि सञ्चार र प्रविधिसम्म जोडिएका छन । तर, केरुङ देखि काठमाडौंसम्मको ७८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकभर अनुदानमा नभए ८० प्रतिशत खर्च चीनको र २० प्रतिशत सरल ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि रेल बनाउने वर्तमान सरकारको सोचाइ छ ।
यसमा तगारो लागेको नै आर्थिक पाटो रहेको छ । अर्थात रेल त आठ बर्षपछि नेपालमा आउला तर यसको खर्च कसरी धान्ने ? भन्ने सवाल खडा भएको छ । यो सवाल यसकारण पनि खडा भएको छ कि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनु अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुर्वप्रधानमन्त्री र पुर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
बालुवाटारमा भएको यो अन्र्तक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र डा.बाबुराम भटटराइले चीनसँगको रेलभन्दा सडक सञ्जाललाई मुख्य ध्यान दिन सुझाव दिए भने ऋणमा रेल ल्याउने कुरामा धेरै अघि नबढन अर्को सुझाव दिए ।यसपछि ७५ प्रतिशत खर्च चीनले बेहोर्ने र २५ प्रतिशत खर्च नेपालले बेहोर्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अलि अप्ठयारो भएको छ । यसैले उनी अब २० प्रतिशत खर्च मात्र बेहोर्न सक्ने अडानमा पुगेका छन ।
नेपालले कस्ता मुद्दा उठाउने ?
ठूला पाहुना नेपाल जस्तो देशमा आउँदा देशकै महत्व बढनु स्वभाविक नै हो । पाहुना आउदा स्वागत गर्ने, न्यानो आतिथ्यता दिने नेपाली संस्कार नै हो ।यसैकारण सडक सफा गर्नेदेखि स्वागतद्वार बनाउने सम्मका काम भएका छन । तर मुल कुरा चीनका राष्ट्रपति आउँदा नेपालले कस्ता मुद्दा कसरी उठाउछ भन्ने नै हो । निश्चयन नै चीन शक्तिशाली र धनी राष्ट्र हो र महत्वपुर्ण कुरा उ हाम्रो छिमेकी हो ।चार पटकसम्म दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नाकावन्दी खेपिसकेको नेपालले उत्तर तर्फको नाका खुला गर्न र यसमार्फत विश्वबजार पुग्नको लागि कोशिश गर्नु स्वभाविक नै हो ।
चीनका राष्ट्रपतिको यस भ्रमणको दौरान नेपालले खोजेको मित्रवत सम्वन्ध नै हो । भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वन्ध थप न्यानो पार्ने बताउदै राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लाभहानीको रुपमा नलिने बताएका छन ।परराष्ट्रविद हिरयण्लाल श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको मुल चासो नै चीनसँग कनेक्टिभिीटीको हो । उनले थप भने–यदि उत्तर तर्फको ढोका खुल्यो भने यसपछि नेपाल ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंक्ड हुनेछ ।
उत्तरतर्फको ढोका खुल्ला गर्नको लागि नेपालले एक हात अघि बढाइसकेको छ । बीआरआईमा सहमति जनाएको मात्र होइन, नेपालले ब्यापार तथा पाहन सम्झौता समेत गरिसकेको छ । तर, नेपालको राजनीतिक आकाशमा नजानिदो ढंगबाट फरक खालको मनोविज्ञान हावी भएको पाइन्छ ।जस्तो, चीनतर्फको नाका खुल्दा भारतले यसलाई नरुचाउला कि ? भन्ने । भारतीय मनोविज्ञान बुझेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाल चीनतर्फ नढल्कोस भन्ने भारतको चाहना त छँदैछ साथसाथै नेपाल जहिले पनि हामीले भने अनुसार मात्र चलोस भन्ने ठालुवाद पनि उसमा देखिन्छ ।
सत्य के हो भने राष्ट्रपति सी चिनफिङको यो ऐतिहासिक भ्रमणलाई भारत वा अन्य देशसँग जोडन आवश्यक छैन । किनपनि यसो भन्न सकिन्छ भने सी नेपाल भन्दा पहिला भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक सम्वाद पछि मात्र नेपाल आउँदैछन ।
नेपाल अघि किन भारत गए सी
भारत भ्रमणपछि नेपाल आउने सीको यो भ्रमणको मुलभुत केही लक्ष्य देखिन्छ । उनी नेपाल बीआरआईमा तनमनका साथ लागोस भन्ने त चाहन्छन नै तर यो भन्दा बढी यस योजनामा भारत पनि लागोस भन्ने उनको चाहना बुझ्न सकिन्छ ।
यदि, भारत बीआरआईमा आएन भने पनि यसको विपक्षमा नजाओस भन्नेमा उनी सचेत छन । परराष्ट्रविद श्रेष्ठका अनुसार, भारतले बीआरआईलाई सगोलमा विरोध गरेको छैन । बरु उसले बीआरआईमा पाकिस्तानलाई किन संलग्न गराएको भन्नेमा मात्र आपत्ति जनाएको छ । उनले थप भने– बीआरआईको अर्को भंगालो हो, एआईआईबी र यसबाट सवैभन्दा बढी भारतले ऋण लिएको छ ।
भारत र चीन ठुला ब्यापारिक साझेदार देश हुन । विश्वमा नै चीनलाई बनिया भनेर चिनिन्छ । अर्थात चीनले जानेको नै ब्यापार गर्न हो । यसकारण भारत चीनको सम्वन्ध ब्यापारको सम्वन्ध हो । र, नेपालको कारण उनीहरुको सम्वन्ध न विग्रन्छ न बन्छ । यसैले नेपालले बीआरआई वा वा चीनतिर लम्कदा भारत चिढिन्छ कि भन्ने पीर लिनुपर्ने देखिन्न ।बरु, नेपालले चीनलाई देखाएर भारतलाई चिढ्याउँछु वा ठेगान लगाउछु भन्ने कच्चा कुटनीतिक प्रयास थाल्यो भने यसलार्ई गम्भीर गल्ती मान्नुपर्छ । किनभने चीन र भारतको यतिवेला आफनै सम्वन्ध छ ।
चीनका राष्ट्रपतिको यस भ्रमणको दौरान नेपालले खोजेको मित्रवत सम्वन्ध नै हो । भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वन्ध थप न्यानो पार्ने बताउदै राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लाभहानीको रुपमा नलिने बताएका छन ।यति हुँदा हुँदै पनि नेपालले केही योजनामा चीनको सहयोग खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा औद्योगिक पार्क बनाउने, नुवाकोट रसुवा जाने सडक खण्डको टोखा छहरेमा सुरुङ बनाउने, मदन भण्डारी अत्याधुनिक विश्वविधालय बनाउने कुरा सहमति गरिनेछ ।
यस देखि बाहेक शनिवार प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीको वार्तालाप पछि थप प्रगति हुनेछ । राष्ट्रपति सी ब्यवहारिक नेता हुन । माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल उनी विश्वपरिवेशमा चीनलाई अगाडि लैजान कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने सवालमा पनि सफल देखिन्छन ।उनै सी एक ध्रुवको नेतृत्व गरेको अमेरिकालार्ई लामो समय यसरी एकछत्र राज गर्न दिने पक्षमा छैनन । यसको लागि उनी भारत र नेपाललाई आफनो पक्षमा पार्ने तहमा छन ।
संसारमा सोभियत रुस र माओकालिन चीन नै त्यस्ता देश हुन जसले आफनो देशको विचार प्रकाशित गरी विश्वभर प्रचारमा लैजाने गर्दथे । भारतमा राज्य लिनु भन्दा पहिला बेलायतीहरु ब्यापारी बनेर कैयौं बर्षसम्म बसेका थिए ।नेपालको सवालमा अहिले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । चीन नेपाललाई आफनो पक्षमा पार्न चाहिरहेको छ । एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहोस, आर्थिक रुपमा, सैन्य शक्तिमा र राजनीतिक विचारमा नेपाल आफनो पक्षमा रहोस भन्ने चीन चाहन्छ । तर, भारत नेपाल चीन तर्फ नढल्कोस भन्ने चाहन्छ ।
यसपछि मात्र उनीहरुले भारतीयलाई गुलाम बनाउने आँट गर्न सके । हामीले माने पनि नमाने पनि नेपालमा रहेका सेभ द चिल्ड्रेनदेखि प्लान इन्टरनेशनलसम्म अमेरिकीहरुको लागि काम गर्छन । यस्तै नियोग अन्य देशको पनि छ । विकासको आवरणमा नेपालमा यसरी विभिन्न देशले राजनीति गरिरहेका छन । तर के चीनले यस्तो गरेको छैन ? वा गर्ने छैन ? अबको लागि अहम सवाल भने यहि हो ।
पुर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतका अनुसार, साइलेन्ट डिप्लोमेसी अपनाइरहेको चीन यतिवेला एक्टिभ डिप्लोमेसी अपनाइरहेको छ ।डा.महतको कुरालाई एकछिन ध्यान दिने हो भने नेपालमा अहिले केवल चीन विकासको कुरा लिएर मात्र छिरेको छैन । यतिवेला मन्डारियन भाषा पढने र पढाउने भन्दै हजार भन्दा बढी प्रशिक्षक नेपाल आउँदैछन । यस्तै, टोल टोलमा चिनियाँ रेष्टुरेन्ट खोल्ने काम भइरहेको छ ।
चीनले यतिवेला आफु सुपरपावर हुनको लागि विकासमा साझेदारी मात्र गरिरहेको छैन । उसले चिनियाँ सभ्यता नै निर्यात गर्न थालेको छ । जस्तो, पश्चिमा राष्ट्रले सुकरात, प्लेटो, सेक्सपियरलाई बजारिकरण गरेजस्तै चीनले पनि लु सुन र कन्फुसियसको विचारलाई प्रवाह गरिरहेको छ ।बेलायतले निर्यात गरेको कोट, टाई हामीले सभ्यताको प्रतीक भन्दै लगाए जस्तै नेपालमा चिनियाँ खाना, चिनियाँ कपडा लगाउने चलन बढन थालेको छ ।
नेपालको सवालमा अहिले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । चीन नेपाललाई आफनो पक्षमा पार्न चाहिरहेको छ । एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहोस, आर्थिक रुपमा, सैन्य शक्तिमा र राजनीतिक विचारमा नेपाल आफनो पक्षमा रहोस भन्ने चीन चाहन्छ । तर, भारत नेपाल चीन तर्फ नढल्कोस भन्ने चाहन्छ ।यसैकारण एकपटक वीपी कोइरालाले भनेका थिए–कुटनीति सम्हाल्ने भारतीय अधिकारीहरु कि त ठालु ब्यवहार देखाउछन कि अरुलाई दास ठान्दछन । तर चीन भने यसको विलकुल फरक खालको छ । उनीहरु नम्र ब्यवहार गर्दछन ।
उता अमेरिका भने चीनलाई सुपरपावर हुन दिने पक्षमा छैन । अमेरिकाको यो स्वार्थमा भारतको पनि मत मिल्दछ । तर, भारत अब चीनलाई रोक्न सक्ने तागत राख्दैन । यसको लागि भारतले अमेरिकी सहयता लिने देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने अमेरिकालाई पस्न दिने पक्षमा न भारत छ न चीन नै ।